Nge-28 ka-Epreli i-Apple izakubhengeza iiakhawunti zayo kwikota ye-2 ka-2021 | Ndisuka mac
Nge-28 ka-Epreli i-Apple izakubhengeza iiakhawunti zayo kwikota ye-2 ka-2021
UManuel Alonso | | Izaziso
Ukuba ufuna ukubona indlela iApple eyaphula ngayo iirekhodi ngokuthelekiswa nezinye iinkampani zeli candelo, unayo ixesha lokuqeshwa elilandelayo ngo-Epreli 28 Kwimeko ebonakalayo apho inkampani iya kubhengeza iziphumo zemali kwikota yokugqibela. Sicinga ukuba baza kubuya bavakalise iinzuzo kunye nezibonelelo njengoko kwenzekile kunyaka ophelileyo, njengenye yeenkampani ezimbalwa eziye zafezekisa eli nyathelo liphakathi kwindyikitya yokufa.
Ngomnyhadala obonakalayo, iApple iyakukhupha amanani kunye nengeniso ngo-Epreli 28 ngo-14: 00 emva kwemini (ixesha lePasifiki). Sicinga ukuba iApple iyakuphinda ibhengeze ukuba inkampani ivelise izibonelelo xa kungekho mntu kweli shishini okwazileyo ukwenza njalo. Ayisiyiyo loo nto kuphela, sicinga ukuba baya kuyithetha loo nto I-Apple iseyeyona nkampani iphambili kwaye isendleleni yokuba kuphela kwenkampani yezigidi ezintathu zeedola.
Unokulandela iziphumo kweli phepha lewebhu ukugcina engqondweni ukuba yeyona nto inamava kwi-iPhone, kwi-iPad okanye kwi-iPod touch usebenzisa i-Safari kwi-iOS 10 okanye kamva. IMac isebenzisa iSafari kwiMacOS Sierra 10.12 okanye kamva. I-PC kunye Windows 10 kunye neMicrosoft Edge. I-MSE, H.264 kunye ne-AAC ziyafuneka.
Ekupheleni kukaJanuwari, Inkampani ibhengeze iziphumo zekota yokugqibela, oko kukuthi, kude kube phakathi kuDisemba. Kuyo inkampani setha irekhodi elitsha lonke ixesha nge-111.400 yezigidi zeedola, iipesenti ezingama-21 ngaphezulu konyaka ophelileyo, kunye nomvuzo wekota ngekota nganye ye-1,68 yeedola, emele ukukhula kweepesenti ezingama-35. Iipesenti ezingama-64 zentengiso yekota zenziwe yi-Apple ngaphandle kwe-US. I-PDF epheleleyo nayo yonke into evezwe ngalo mhla ungayifumana apha.
Siza kubona ukuba la manani agqithisiwe. Nangona kungekho sixhobo sitsha sinikiweyo, sinexesha lookumkani phakathi. Sicinga ukuba oku kuya kuba nefuthe kwinkampani kunye namanani ayo ngokulungileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Nge-28 ka-Epreli i-Apple izakubhengeza iiakhawunti zayo kwikota ye-2 ka-2021
U-Ian Gomez ujoyine abadlali be-Apple TV + entsha "yePhysical"
UZennen Clifton ujoyina iApple TV + njengeGunya lokuLawula.